Svondo, October 30, 2005 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwenguva yakareba, iyo indasitiri yesoftware yakakamurwa pakati peSoftware boka uye neApplication Service Provider boka. Software inotakura uye inomhanya munzvimbo yako paPC / MAC. ASP software inomhanya pane server uye iwe unobatana kuburikidza nebrowser. Iko mukana weASP ndeyekuti ivo vanogona kuburitsa kururamisa uye zvitsva zvinhu pasina iwe uchifanira kuisa chero chinhu munharaunda. Chinhu chakakanganisika ndechekuti iyo browser-based software yaive yakaganhurirwa zvakanyanya nekuda kwevatengi-parutivi kuronga uye kushomeka kwebrowser.
Mimwe mienzaniso mihombe: Tarisa uone basa rekuzvuva nekudonhedza pane izvi nzvimbo.
Iwe unofarira MS Word here? Kune vamwe vasinganzwisisike edhita kunze uko pawebhu. Heino imwe.
Hazvizotora nguva refu Vasati Vashandisi veSevhisi vatanga kutora nzvimbo. Ini ndinogona kufungidzira zuva raunobvarura Microsoft Office ye $ 9.95 pamwedzi pane kubhadhara mazana mashoma kwerezinesi rega rega.
Dec 16, 2007 pa 2: 20 AM
@Douglas: "PHP uye VBScript mienzaniso yemitauro-yeparutivi mitauro."
Izvo chaizvo hazvisi technically ichokwadi nezveVBScript. Chii chingave chiri chechokwadi chingadai chiri chekuti "VBScript muenzaniso werurimi rwekunyora urwo rwakanyanya kushandiswa paServer-parutivi semutauro wekutanga weASP yeMicrosoft kunyangwe ichizoshandiswa semutauro wevatengi-padivi kunyora muMicrosoft Internet Explorer."
Hongu, ndeyemuromo uye ini ndaigona kunge ndakazvinyudza pasi, asi ndikapihwa mamiriro acho, nei uchienda mukuedza? 🙂